Kedu ihe Kenza pụtara na Islam? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Kanza pụtara - ịza ajụjụ ndị ahụ
Kanza pụtara - ịza ajụjụ ndị ahụ
Kedu ihe Kenza pụtara na Islam?
Ezigbo Sir ma ọ bụ Oriaku, Mmadụ Bịa ka mmụta isiokwu Nkuzi si ifactner.com. N'isiokwu nkuzi nke taa, anyị ga-amụta ihe aha ụmụ nwanyị Muslim na-amalite na K.
Kaamilah pụtara Complete, Kaamla zuru oke pụtara PerfectKaashifah pụtara Explorer, Detective, Night Owl, ExplorerKabeerah pụtara Immense, Great, Senior, Elder, BigKadira pụtara Mighty Kaheesha pụtara aha onye na-ede uri Kaia pụtara Stability Kaif pụtara A State of JoyKaleemah pụtara Otu Ọkà Okwu Kalila pụtara Obi, Onye a hụrụ n'anya Kanwal pụtara Lotus Kamaliyah pụtara izu okè Kameela pụtara Kachasị Kamil pụtara Kamiz pụtara Onye zuru okè Kaneez pụtara ohuKaneezah pụtara nkwụsi ike, ahụ siri ike Kanz pụtara akụKanzah pụtara akụ Karam pụtara agwa mara mma, mmesapụ akaKardawiyah pụtara nwanyị dị nsọ Kareemah pụtara mmesapụ aka, amara. nnukwu, mmesapụ aka, Karida Untouched Karimah pụtara mmesapụ aka, ezigbo Kas pụtara iko Kashifah pụtara ikwiikwii abalị Kashmala pụtara mgbaaka ma ọ bụ olu olu nke okooko osisi Kathirah (Kasirah) pụtara ọtụtụ Kaukab pụtara otu kpakpando Kausar pụtara Reservoi r na paradaịs Kebira pụtara Dike, Kehkashan pụtara Milky Way, Galaxy Khadijah pụtara Onye Amụma Muhammad (PBUH.)) Firs Tw ife. / Nwanyị izizi ga-anabata Islam Khadra pụtara Raindrop, Khairah pụtara Ezigbo nessdị Ọma, Ọdịmma, Obi ,tọ, Obi permanenttọ, Ahụike pụtara na-adịgide adịgide, na-adịgide adịgide, anwụghị anwụ, ebighi ebi ụmụ nwanyịKharijah pụtara na mpụga Kharqa pụtara ike, ifufeKhatoon pụtara nwanyị Khawlah pụtara onye nwere àgwà mara mma, nwanyị gazelle Khayrah pụtara ezigboKhayriyah pụtara obiọma, ezigbo khazanah pụtara TreasureKhidrah pụtara agba agba Khooshbakht pụtara obi ụtọKhulood pụtara anwụghị anwụ Khursheed pụtara SunKhusbakht pụtara chi ọma Khushnood pụtara obi ụtọ, contentKhuwailah pụtara ma ọ bụ nwa agbọghọ mgbada, aha nwanyị Khuzamah pụtara lavender Kiah pụtara mmalite ọhụrụKishwar bụrụ ihe na-egosi ókèala, mpaghara pụtara osimiri Kouther / Kauser na Jannah, paradaịs, Kubra pụtara Great, agadi Kulthoom / Kulsum pụtara nwanyị jupụtara na anụ na ihu na cheeks, silk pennants na ọkọlọtọ, Culthoom pụtara ada Proph et Muhammad (PBUH) Kuwaysah pụtara Pretty Kyna pụtara ọgụgụ isi Disclaimer: Isiokwu nkuzi a bụ maka ịkekọrịta ihe ọmụma naanị.
Enweghị m ike ikwenye na izi ezi nke nkọwa na ịkpọ okwu aha na nkuzi a. E nwere ụzọ dị iche iche isi asụpe na ịkpọ aha. M ga-adụ gị ọdụ ka ị gakwuru onye ọkà mmụta mpaghara maka nkwenye tupu ịme otu aha aha gị.
Kedu ka esi ede Kanza na Arabic?
Nkọwa okwu Latin nkeArabicaha sweta (Kenza)pụtaraakụ
Ndi Dashlane na akwado ya. Jiri ngwa ngwa mejupụta okwuntughe gị maka ụbọchị 30 n'efu site na iji njikọ na nkọwa ahụ. Ka ụgbọ elu gị na-apụ ma malite ọdịda na Nur-Sultan, lee ọmarịcha ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke kpuchiri Kazakhstan.
Ma ọ bụ n'oge oyi, ọtụtụ ahịrị snow dị ka anya pụrụ ịhụ, na-eme Nur-Sultan isi obodo nke abụọ kachasị oyi n'ụwa. Tupu ị rịtuo n’elu ala, isi oche gị dị na windo nkịtị na Kazakhstan dum. Ọdụ ụgbọ elu ahụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ bụ ọhụụ dị iche iche nke ọdịnihu nke ọdịnihu.
Edere aha ọdụ ụgbọ elu na n'akụkụ abụọ - n'otu akụkụ na Cyrillic na nke ọzọ na Latin, nke gosipụtara agbụrụ na asụsụ dị iche iche. Otú ọ dị, akwụkwọ ozi ndị dị n'aka ekpe, ga-apụ n'anya n'oge na-adịghị anya. N’abalị iri abụọ na isii n’ọnwa iri n’afọ 2017, Nazarbayev nyere Onye isi ala Iwu nke 569, nke gbanwere mkpụrụedemede Kazakh niile site na Cyrillic gaa na Latin.
Iji maa atụ, leta a ghọrọ nke a. Nke a na-abụ nke a na ndị ọzọ. Ka ọ na-erule afọ 2025, akwụkwọ ozi ọ bụla na obodo a nke nwere nde mmadụ 18 - akara ọ bụla, akwụkwọ ọgụgụ ọ bụla, menu ọ bụla, akara okporo ụzọ ọ bụla, websaịtị ọ bụla na akara ngosi ọ bụla ka a ga-edegharị ma ndị nkuzi ga-agụtaghachi ha.
Gọọmentị etinyela ego nde $ 600 maka mgbanwe a, ihe dịka 90% nke a ga-eji kụziere ọha na eze ka ha gụọ ma dee mkpụrụedemede ọhụrụ a. Ọfịs, ihe kpatara ọrụ a pụrụ iche dị mfe: mkpụrụedemede 42 nke mkpụrụedemede Cyrillic na-eme ka ịdebanye ihe siri ike. Latin na-eme ka asụsụ dị mfe, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịmụ, ide na ide ụdị.
Eziokwu ahụ gbagwojuru anya. Na, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Kewaa n'etiti Europe na Eshia, Kazakhstan bụ ọtụtụ ihe
Obodo nke itoolu kachasị na mpaghara, nnukwu ime obodo na mba nke atọ kachasị ukwuu na-asụ asụsụ Russia na ụwa. Mana njirimara ya puru iche bu enweghi otu ihe njikota onu. Kazakhstan bụ mba nwere ọtụtụ - ọtụtụ asụsụ, ọdịbendị, nri, na ụbọchị ezumike.
Ọchịchị, ọ na-agba Afọ Ọhụrụ atọ dị iche iche: Jenụwarị 1st, wee bụrụ 14th - Ale ftover site na kalenda Julian nke ụbọchị Soviet, na ọzọ na Machị. Ozugbo ọ na-agagharị agagharị, alaeze Mongol wakporo ala Kazakhstan ma chịkwaa ya na Alaeze Ukwu Russia tupu ọ nweta nnwere onwe nwa oge. Na 1920 ọ ghọrọ ọchịchị kwụụrụ onwe Soviet na-agbanwe ìgwè ndị na-awagharị awagharị gaa n'obodo nta, mana mbọ mkpokọta ha gburu ihe karịrị otu nde mmadụ na ọkara, otu ụzọ n'ụzọ ise nke ndị bi n'oge ahụ, ọkachasị n'ihi agụụ na ọrịa.
N’oge a, ọtụtụ ndị Kazakhstan gbagara agbata obi ha dị na Uzbekistan, Turkmenistan na China. Na 1936 Kazakhstan ghọrọ mba mejupụtara nke Soviet Union. Obodo Moscow nke dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ, nke a na-akpọ Semey ugbu a, bụ ebe Moscow jiri bụrụ ebe mbụ ọ tụrụ bọmbụ atọm, ọtụtụ narị mmadụ na-esochi ya ruo mgbe enweghị ike ileghara ihe ndị metụtara obibi na nke ndu anya.
Ruo taa, mba ahụ na-akwụ nnukwu ụgwọ maka ihe gara aga. N’afọ 2013, ndị bi n’otu obere obodo a na-akpọ Kalachi bidoro hie ụra ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụdị n’ụbọchị. Tupu mmadụ 152 anwụọ, ndị dọkịta chere na vodka adịgboroja bụ onye kpatara ya.
Nnyocha zuru ụwa ọnụ mechara kpughee ihe kpatara ya: ogbugba uranium nke oge Soviet hapụrụ n'oge dị nso. Kazakhstan kwupụtara nnwere onwe na December 16, 1991, ụbọchị iri tupu oge Soviet. Njikọ ahụ gbawara.
Dị ka ndị agbata obi ya, steeti ọhụrụ ahụ chọpụtara na ụlọ nrụpụta ọrụ ya adịghị arụ ọrụ nke ọma, akụ na ụba na-akụ afọ n’ala, na ọnụ ndị be ya ga-eju afọ. Ma Kazakhstan pụrụ iche n’otu ụzọ dị mkpa: ọ bụụrụ agbụrụ kachasị elu. N’afọ 1989, Armenia bụ 93% Armenia, Lithuania 79% Lithuanian, na Georgia 70% Georgia.
Kazakhstan, n'aka nke ọzọ, naanị 39% si Kazakhs. Ọ bụ na ọ dịla anya nnukwu ndị mmadụ - daalụ, n'ọtụtụ akụkụ n'ihi mbugharị Soviet. N’agbata afọ 1907 na 12, ụzọ ụgbọ okporo ígwè e mere ọhụrụ mere ka nde mmadụ 2.4 si Central Russia rute ugwu Kazakhstan.
Onye ọzọ 1.7 nde kwabatara rutere na Soviet Union's Virgin Landscampaign n'etiti 54 na 62 iji bulie ion mmepụta ọrụ ugbo n'ime Soviet Union abụghị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge ahụ, mana mgbe ọdịda ha gasịrị, nkọwa ndị a dị mkpirikpi akụkọ a ghọrọ nnukwu ihe ịma aka maka ọbụbụeze nke Kazakhstan, nke na-enweghị agbụrụ dị n'otu ga-alụ ọgụ siri ike karị iji bụrụ steeti nwere ike ịdị. Ndị Kazakhs n'onwe ha bụ ndị pere mpe na 40% nke ndị bi na ya, ọ bụ ezie na a na-akpọ obodo ahụ.
Ndị Slav nwere 44% na-echekarị na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụụ gbanwere ma yie egwu ịchọta steeti ha. Ngụkọta nke nde mmadụ 2.6 hapụrụ Kazakhstan na 1990s.
Ọtụtụ mgbe, ndị Russia na-alaghachi Russia. N'oge a, a maara Putin maka ịme iyi egwu aghụghọ nke na-agbagha izi ezi nke onye agbata obi ya nke ndịda, na-atụ aro na ọ nweghị ịdị n'otu dị mkpa maka steeti bụ onye kachasị mkpa ya na ya. Kazakhstan nwere nke iri na abụọ kachasị gosipụta mmanụ na ụwa, yana China na USA.
E jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ dị n'Ebe Etiti Eshia, naanị nke a bụ otu ihe kachasị nwee ụba akụ na ụba dị ka Kyrgyzstan na Uzbekistan. O di nwute, dika i nwere ike icheta, o nweghi ike ịbanye n'oké osimiri. Nke a na-amanye ya ịkwaga nnukwu akụkụ mmanụ ya site na Russia, dịka ọmụmaatụ na ọdụ ụgbọ mmiri dị na Oké Osimiri Ojii.
Nke a bụ ma bụrụ isi ihe ịma aka nye Kazakhstan. N'oge mgbe Russia na-achọ ịgbasa ókèala ya, Kazakhstan ga-emerịrị nlezianya iji gosipụta ọbụbụeze ya ma ghara iwe iwe megide onye isi ya na mmeghachi omume sitere na Russia, nke a na-egosipụtakarị onwe ya n'ụzọ dị nro, ọdịbendị na nke ihe atụ nke gbanwere njirimara ya iji gosi. Asụsụ ya, dịka ọmụmaatụ.
N'ọgwụgwụ 1930s, Soviet Union tụrụ egwu na ndị agbụrụ ya nwere ike ịmalite njirimara, ndị na-abụghị Soviet, na-eke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20 dị iche iche nke mkpụrụedemede Cyrillic maka asụsụ nke ọ bụla, gụnyere Kazakh. N’oge a, ndị Russia gbasara ngwa ngwa na Kazakhstan. Ya mere, ebe Kazakh dịla anya ọ bụ “steeti l ahuru”, Rọshịa gbasakwara agbasa.
Ọbụna ihe mgbagwoju anya karị - n'ihi na e dere Kazakh na mkpụrụedemede Arabic tupu Cyrillic, ndị gbagara China ma ọ bụ ebe ọzọ n'oge Soviet ga-alaghachi n'enweghị ike ịgụ ma ọ bụ dee asụsụ nke ha. Kemgbe Soviet Union dara, Moldova, Azerbaijan, Uzbekistan na Turkmenistan agbanweela mkpụrụedemede ha. Mana n'ihi ọdịiche ya dị iche iche, Kazakhstan ji nlezianya na-ejigide nkwụsi ike ma na-agbaso ihe nlereanya ha ugbu a.
Ebumnuche mbụ nke 2017 bụ iji mkpụrụedemede mkpụrụedemede 32 mkpụrụedemede Latin, mana edegharịrị ya na afọ gara aga mgbe ọha na eze weghaara akwụkwọ ozi itoolu ya na apostrophes, na-eme ka asụsụ ahụ dị mgbagwoju anya. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ebe ọrụ gọọmentị, gọọmentị na-achịkwa agbụrụ ha site na mbata na ọpụpụ. Mmemme nlọghachi pụrụ iche na-enye mkpali dị ka ịkwụghachi otu oge, ịkwụ ụgwọ ụlọ, na ụmụ amaala Kazakhs ga-alaghachi ngwa ngwa.
Almaty, obodo ya kachasị nwee obodo, sitere na 22% Kazakh na nnwere onwe ruo 60% na 2018. 17 ruo 78% na Nur-Sultan. A gbara ndị kwabatara ume ka ha biri n'obodo ha dị na mgbago ugwu na Russia, ihe dịka 60 ma ọ bụ 80% Russia, n'okpuru mkpuchi nke ụkọ ọrụ.
Ndị gọọmentị na-enyocha mpaghara Slavic ndị a nke ọma maka ndị na-ekewapụ onwe ha na-atụkwasịghị obi njide. Ihe ncheta nke na-apụtachaghị ìhè nke ikike ya dị elu karịa obodo: 'Kazakhstan' nke e dere na nnukwu akwụkwọ ozi ọcha. Esemokwu ezinụlọ dị n'etiti agbụrụ dị iche iche na 2015 kụrụ ngwa ngwa ndị uwe ojii na-ahụ maka ọgba aghara bụ ndị mechiri intaneti niile n'ime kilomita 120 iji gbochie mgbasa nke esemokwu.
Ndị otu mba Russia, n'aka nke ya, na-eji ihe omume dị ka nke a kọwaa mmejọ nke Slav na mkpa ọ dị itinye aka na nke ha. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na enwere obi abụọ ọ bụla banyere ọchịchọ Kazakhstan ịnọgide na-achịkwa Slavic dị n'ebe ugwu, o mere mkpebi siri ike na 1997 iji wepu isi obodo ya site na Almaty gaa n'obodo ọhụrụ e mere atụmatụ akpọrọ Astana, emesịa Rena. med Nur- Sultan na 2019.
N’ebe a kwa, emere mgbanwe a n’okirikiri na Almaty pere mpe ma na -enwekarị ala ọma jijiji. Dị ka nkwupụta ndị ọzọ sitere n'aka ndị ọchịchị aka ike, ndị nta akụkọ si mba ofesi zutere ya, usoro agbakọgoro iji gosi ike ọchịchị na mpaghara ugwu Russia. Ọdịiche ya, ọdịdị ga-eme n'ọdịnihu na-ama ụma na-ese onyinyo obodo nke oge a, ọgaranya, ọ bụghị Soviet mbụ 'ihe stan'.
Ka ọ dị ugbu a, Russia na-aga n'ihu na-eme obodo Baikonur obi, dịka ọmụmaatụ, agbaziri Russia ruo 2050 ma jiri ya dị ka spaceport mbụ na nke kachasị ibu. N'ihi owuwu site n'oge Soviet, ụfọdụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè Kazakh na-agafe n'ókèala Russia. Russia nwere afọ ojuju na nke a.
Kazakhstan achọpụtala na mpaghara mpaghara kwụsiri ike wee mee ihe dị ka ihe nchekwa nke na-echebe Moscow pụọ na steeti ndị enweghị enyi. Mana ịdọ aka na ntị doro anya n'azụ Putin na-eyi egwu oge ụfọdụ bụ na ókèala ya dị nfe n gbalịa ịba uru ọzọ.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, China aghọwo onye mmekọ akụ na ụba ọhụrụ dị ike. Taa, otu ụlọ ọrụ ndị China na-achịkwa otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mmanụ ya, obodo dị na Khorgos abụrụla isi ahịa, yana ụgbọ oloko si ọdịda anyanwụ Europe na-ejikọta ọwụwa anyanwụ China, na-echekwa izu nke njem site n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ nde dollar site na ikuku, n'agbanyeghị inwe uru Obi abụọ, ọ ghọwo isi nke mkpuchi akụ na ụba $ 1 nke China maka Belt na okporo ụzọ. Gọọmentị Kazakh kwuru na China bụ isi ihe na-ebelata ịdabere na mmanụ.
Ma ruo ugbu a, ọ rụọ ọrụ. Kazakhstan bụ ezigbo ihe atụ nke ụzọ isi mee ihe na-atọ ọtụtụ ndị mmadụ ụtọ. O jigidela Russia dịka onye nchebe ya, mee ka ndị agbụrụ ya nwee obi ụtọ, yana mmekọrịta ọhụrụ na China na mpaghara ọwụwa anyanwụ ya, ebe ọ na-aga n'ihu akụ na ụba nke ndị agbata obi Central Asia.
Ihe a niile emeela ya site na ịmepụta uto obi ọjọọ ya nke ike ọchịchị. Dịka naanị onye isi ala ahụ site na 1991 ruo n'afọ ahụ, ụdị ofufe nke Nursultan Nazarbayev mara nke Kim Jong-Un. O kwuru ozugbo, sị: 'A machibidowo m abụ ọma niile nke otuto na aro inye onwe m otuto karịa ụdị otuto na otuto, m ga-aga n'ihu ịkwado ọnọdụ a. Isi obodo, ọdụ ụgbọ elu na mahadum ka a kpọrọ maka nsọpụrụ ya.
Mgbe o meriri 97.7% nke ntuli aka na ntuli aka 2015, Nazarbayev rịọrọ mgbaghara ma tụọ aro na ya nwere ike itinye aka na oke ya, mana nke ahụ ga-adị ka ọ bụghị onye ọchịchị. O kwukwara otu oge na ndị isi kwesịrị ịla ezumike nka mgbe afọ 25 gachara tupu ha aga n'ihu na-arụ ọrụ. A mụrụ 29.52% nke ndị bi n'oge ọchịchị ya, na-akpata nkwụsi ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mba na-anaghị enweta nlebara anya mba ụwa n'agbanyeghị ịbụ ndị ọchịchị aka ike dị ka Russia ma ọ bụ China.
Agbanyeghị, nke a bụ nsogbu enweghị atụ nke ikike ọchịchị. Achọpụtaghị ezi nguzo ya n'ụzọ zuru oke - enweghị afọ ojuju na-atụ ụjọ maka ntaramahụhụ maka ikwu okwu ruo mgbe a tọhapụrụ ya na mberede, iwe eweghachitere na mbụ na-agba na mberede. Ọnọdụ ike ọchịchị kwụsiri ike nwere ike ịdaba ngwa ngwa n'ọgba aghara, mana ọ gaghị ekwe omume ịmara mgbe ma ọ bụ ihe dị ka nke a ga-agbanwe.
Ihe ịrịba ama ịdọ aka na ntị adịlarị maka Kazakhstan: Mkpọchi Uyghurs na Kazakhs na China n'ime oke ala ya emeela ka ịrị elu ngwa ngwa nke echiche ndị China na Kazakhstan, ebe a na-ahụ njikọ aka China dị ka ibu kama ịbụ ohere. Mgbe gọọmentị kwuputara atụmatụ maka ịrenye ndị na-azụ ahịa China ego, ọtụtụ ụmụ amaala mere ngagharị iwe. Njikọ aka nke Russia na Crimea emewokwa ka mba ahụ na-enyo ya enyo dị ka mba Russia nke abụọ kacha nwee akụ na ụba na oke ike.
N'ime obodo, ụfọdụ ndị Slav agbụrụ na Kazakhstan na-enwewanye mmetụta dị ka ụmụ amaala nke abụọ, a manyere ha ịhapụ asụsụ nke ha ma kewapụ ha na gọọmentị nke ha, dabere na ọnọdụ ala dị n'etiti kọntinent abụọ, ndị dike abụọ zuru ụwa ọnụ, na ọtụtụ narị ọdịbendị. Mana ọ ga-ele anya ma njikọ a ga-abụ akụnụba ha kachasị elu ma ọ bụ na a ga-agbanwe ya. Ọfọn, ma ị bi na steeti aka ike dị ka Kazakhstan ma ọ bụ na ọ bụghị, ị kwesịrị iji Dashlane mepụta, zoo ma mejupụta okwuntughe gị.
Onwe m, a na m eji ndị njikwa okwuntughe ruo ọtụtụ afọ, naanị n'ihi na ọ dị mfe: site na ịpị otu ị nwere paswọọdụ ọhụrụ echedoro yana nke ọzọ ịbanyela. N'adịghị ka sistemụ ndị ọzọ dị ka Keychain ma ọ bụ Chrome, a na-edebe ozi nzuzo gị gafee ihe niile nke ihe nchọgharị gị na ngwaọrụ gị. Ọbụna nke ka mma, Dashlane na-abịa na VPN ka ị wee lelee US Netflix, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eme njem mba ọzọ.
UI na ịdị mfe nke iji dị m ezigbo mkpa, nke mere na enwere m obi anụrị maka ngwa ngwa mkpanaka ha, a na-emelite ya oge niile. Jiri njikọ dị na nkọwa ahụ iji nweta nnwale ụbọchị 30 n'efu nke Dashlane Premium - enweghị kaadị akwụmụgwọ achọrọ. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, jiri koodu m 'pol ymatter' na ndenye ọpụpụ maka ego 10% na ịkwado ọwa ahụ.
Daalụ maka gị na ikiri edemede a.
Kedu ihe pụtara minhaz?
Dee Kanzana Urdu, Hindi,Arabic, Bangla (Kanzaịkpọ okwu n'asụsụ dị iche iche
Ọ dị mma izute gị. Abụ m nnukwu onye ofufe. Daalụ.
bmc ugwu igwe
Abụ m nnukwu onye ofufe nke gị. Daalụ. Ma ọ bụ Hasan Minhaj.
Mba. Ee. Mbanụ.
N'ezie? Aha m bụ Hasan Minhaj. Oh Achọrọ m ime nke a.
otu esi eji ejiji igwe kwụ otu ebe
Achọrọ m ime nke a na TV mba. Biko biko n'ihi na onye ọ bụla nke na-akpọ aha gị kwuru Hasan Minhaj. Ee, mana etu ị si akpọ ya na nke ahụ bụ nnukwu ihe n'ihi na ndị mụrụ m nọ ebe a, ọ bụ Hasan Minhaj.
Ndị mmadụ na-ekwukwa na ọ bụ ihe ọjọọ. You're na-adị ka Hasseen Minaja, Hussein. Ọ dị nwute na enweghị m ike ịkpọ ya Mara nwa m Higsby Withherthrottle III.
Na m dị ka - otu esi ekwupụta ya - gbalịa ya. Ọ dị mma, Hassin Menish. Mba, nke ahụ abụghị - Mba, mba.
M - anya, enwere m ekele maka ndị na - anwa - ọ bụ ihe ngosi ejije mba ụwa ebe mmadụ itoolu na - eti ibe ha mkpu. Onye nhazi ahụ wee kpọpụta m. Ọ dị ka ọ na-agbasi mbọ ike, ọ na-eku ume ike.
Naanị ihe o kwuru bụ inye ya maka Hossin Meanhaj. Ọ dị ka ịkọ m ọgwụ na m na-ekwu na ịkwesighi. Kwuo ya ọzọ ka ndị mmadụ wee nụ ọzọ.
Hasan Minhaj | Hasan Minhaj | Ee ọ bụ ya.
Hasan. Eeh. Hasan ị maara, malitere ịme ihe ọchị, ụmụ okorobịa, dịka, ị kwesịrị ịgbanwe aha gị.
Echere m na agaghị m agbanwe aha m Ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọ Ansel Elgort, ị nwere ike ịkpọ Hasan Minhaj. Onwere onye omeegwu aha ya bu Ansel Elgort, anyi nile na agaghari na-ekwuputa ya dika okwesiri. Eeh, ee, DeGeneres siri ike ka ndị mmadụ bia na obere oge.
Kedu ihe ị mere? DeGeneres ma ọ bụ Degenerate ma ọ bụ ihe, ị maara, ọtụtụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nọgidere na-agbasi ike, ee, ma ugbu a ọ bụ DeGeneres, ee, mana Hasan Minhaj, ee, Minhaj, Minhaj, ya mere ntụgharị uche dị na H, ee, na ihe ị ga-eme na Starbucks? gaa Timothée Chalamet. Ọ dị mma. M na-eme ka ọ dị mfe Ee, ha na-enwetakarị ya.
Na ihe mmasị, ị dị ka Timothée nwere esote abụọ? Ọ dịkwa m, ee, adị m. Oh wow Wow, ụmụ agbọghọ ga-apụ apụ ma ọ bụrụ na ị ga-ahụ. Eeh.
Kind nwere ụdị mmechuihu. Ya mere, ị na-ekwu na ndị mụrụ gị nọ na-ege ntị. Eeh.
Mama na papa ga-eru nso ebe a. Ndewo Mama na Papa. Ha bụ Najme na Seema.
Ndewo, Najme na Seema! Ma ọ bụ nnukwu Fans nke ihe nkiri ahụ, Ellen. Oh ekele. Mama m chọrọ n'ezie ka m gbanwee usoro nke ihe ngosi m ka ọ dị ka Ellen.
Ahụla m. Mba, enwerem ihe ngosi m. O nwere ike inwe ihe ngosi ya .Ihe ngosi ya dị iche na nke m.
Ma ọ dị mma. Nke ahụ bụ ihe na-amasị m na ya. Ọ bụ a kpam kpam dị iche iche format.
Enwere ọtụtụ ngebichi ma ọ nweghị obi ụtọ, mana mba. M pụtara, anyị na-ekpuchi ihe siri ike. Eeh.
Ọ bụ n'ezie smart. Ga-abụ nnukwu smart ịghọta na isonye. Mana chere tupu anyị erute nke ahụ.
Yabụ kedu mgbe ịmalitere nkwụgogo na etu ha siri kwado ya? Ọfọn, m ga - n'ezie - Mama, ị maara nke ahụ, achọrọ m - anyị nwere obere nzuzo anyị. Anọ m na mahadum. Na m ga-asị, hey, M na-aga n'ọbá akwụkwọ.
Ma mgbe ahụ, m ga-ewere Camry na mama m ga-agwa papa m, hey, ọ na-aga n'ọbá akwụkwọ. Ma nke ahụ bụ otu anyị si ebi na D avis. Na m na-aga San Francisco Punch Line n'ihi ya, ọ bụ ihe dị ka otu awa, Ee, na Otu n'ime abalị ndị ahụ mgbe m na-aga n'ọbá akwụkwọ, m mechara banye na Vallejo na mberede nke ụgbọ ala ahụ dị n'ụzọ.
M kwesịrị ịkpọ ụlọ. Na nne, cheta, ị nyefere papa gị ekwentị ahụ. Ma ị chere na enweghị m ike - enweghị m ike ikpuchi gị ọzọ.
Ya mere, emere m ka nna m rute Vallejo mmiri na-ezo na ọ dị oke egwu. Ọ sị na nke ahụ tere aka maka ọba akwụkwọ ahụ, ọfụma, nwa? dị ka, gịnị kpatara na ị gaghị ese anwụrụ ahịhịa dị ka ndị ọzọ na kọleji. Na ebe ahụ ka m chọpụtara na Najme Minhaj bụ 420 enyi na enyi.
Yabụ nke ahụ dị mma, eeh, mana ị ga- - ị na-aga ịhụ gị mgbe mgbe? Ha na-akwado gị mgbe ị malitere? Mba ha emeghị. Cheta, Anọ m n'ọbá akwụkwọ. Ama m! Eeh.
Ma ugbu a, ha emeela. Ugbu a ha dị jụụ. Ọ bụrụhaala na m na-eme Ellen, mama m dị ka, m nwere ike ịkpọ m na-arịa ọrịa.
Eeh. Ọ dị mma, yabụ na ị na-eme ihe ngosi a ugbu a, ahụrụ m nguzosi ike gị ike. Echere m na nke ahụ dị egwu.
Daalụ. Ya mere gwa onye obula ihe ihe ngosi a bu. Maka na ọ bụ ndọrọndọrọ na-atọ ọchị ma na-ele ihe niile anya.
Ee, anyị nwere ike ịmasị ya, anyị na-eme ya ụdị nnukwu akụkọ nyocha na-ekpo ọkụ na okpomoku ụwa ma ọ bụ na ị maara, ụgwọ mgbazinye ego ụmụ akwụkwọ. Naanị ihe ọchị, ihe na-atọ ụtọ ndị mmadụ chọrọ ịhụ. Ọ dị mma n'aka gị, nke mere ka ọ dịkwuo mfe igwu.
Eeh. Ọ ka mara mma, mana ọ na-atọkwa ụtọ. Ee, mana echere m na ndị mmadụ ga - elele afọ atọ n’abịa ma gbalịa karịa fris na oge izizi.
Ee amara m. Ama m. Anọ m na-ekwu na anyị na-arụsi ọrụ ike.
Anyị ga-enwerịrị nwa ewu na fries. Nke ahụ bụ ihe niile ị chọrọ n'ezie. Eeh.
A na-akpọ ya Iwu Patriot, ọ na-asọ ugbu a na Netflix. Anyị ga-alaghachi azụ. Ndewo, a bụ m Andy.
Ellen gwara m ka m chetara gị ka ị debanye aha na ọwa ya ka ị nwee ike ilele isiokwu ndị ọzọ dị oke egwu, dịka maka isiokwu atụ nke m na-atụ ụjọ ma ọ bụ kwuo ihe ihere, dị ka hama hama. Nakwa ụfọdụ isiokwu sitere na Ellen na ndị ọzọ ama ama ma ọ bụrụ na ọ bụ nke gị.
Kedu ihe Olinda pụtara?
Jenda: nwata nwoke. Mmalite: muslim, Indian, Muslim.Obinna pụtara aha: Roadzọ, Pzọ.
Brazil bụ obodo mara mma nke jupụtara na ndị mmadụ mara mma, ebe dị egwu na ndụ abalị na-akpali akpali na n'ezie egwuregwu Olympic nke 2016, nke na-aga nke ọma n'oge a. Ekwenyesiri m ike na ị nụla banyere nje Zika. Ezequiel Nọdụ ala, ọ bụ anwụnta na-ebute nje Zika na oke ohere nke ihe egwu bụ maka ụmụ nwanyị dị ime bụ ndị kwesịrị ịtụle mpaghara ahụ maka onye ọ bụla zere, na-enwe mmekọahụ na-adịghị ize ndụ ebe enwere anwụnta na-egbu ọtụtụ ma na-eyi ogologo aka na trouzas okay entendido gracias Senor anaghị asụ Spanish ọtụtụ ndị ọbịa na-aga Brazil na-atụ anya ịnụ Spanish, mana n'adịghị ka ndị agbata obi South America, asụsụ mbụ Brazil bụ Portuguese Don 'Adịla ndị njem nlegharị anya na-amaghị ihe na-achọ ịgwa ndị obodo ahụ okwu n'asụsụ Spanish mebiri emebi ị ga-eyi Whoa adịghị eme nke ahụ ọmarịcha akara ọ bụ mkparị mkparị na Brazil, mana mkpịsị aka elu pụtara ihe yiri oke mma n'ụzọ nkịtị bellezza ma ọ bụ ịma mma ma jiri ya ọtụtụ ihe ka ị wee zute m ọ bụ enyi oh mba, M gawa naanị, mana m dị mma, naanị a don'tụla naanị ya, ọ bụ ihe nkịtị na Brazil ịkọrọ gị estupido Mintage Ilana ma ọ bụ nzuzu nzuzu biya na ndị ọzọ ọtụtụ ụlọ mmanya na-ere naanị biya biya na 700 milliliters Bottles and somet Imes ọbụlagodi ndị bịara abịa ga-eji enyo anya ha gosipụta, ọ dị mma, kwupụtakwa kaadị nhọrọ nnabata. Ọtụtụ ụlọ mmanya na klọb na-arụ ọrụ na kaadị oriri maka onye ahịa ọ bụla ịdekọ nri na ihe ọ drinkụ drinkụ na ndị ọbịa ga-edozi ụgwọ ha tupu ha apụ na nke a anaghị akpata nnukwu ego.
Percy Next Chere Enweghị ndidi, ihe na-agagharị n’usoro nke ha na Brazil. Ogologo ahịrị bụ ihe a na-ahụkarị maka ihe niile site na ATM gaa na ụlọ ahịa, yabụ dịrị njikere iji ndidi chere atụmatụ ị ga-eleta Rio de Janeiro N'ịhụ egwuregwu Olympic n'ezie, ugbu a ịmarala ebe ọzọ ị ga-ahụ ya. Brazil oh chefuo ndị Amazons atụla ụjọ ị banye n'ime ime ebe ndị dịpụrụ adịpụ Gaa njem na Amazon Rainforest Falls, obere obodo ndị dị ka Olindaor Auto Prix Tour ma ọ bụ gaa Fernandode Noronhaarchipelago iji mụta ụfọdụ ihe nzuzo nzuzo Brazil kachasị mma site na mpaghara ndị njem. ee mana ọ bụrụ n’icheta na Brazil ka bụ mba na-emepe emepe ma ị gafere ụfọdụ favelas dị oke njọ, ọgwụ ọjọọ mebiri Obodo na ndị na-akparị mmadụ, agatụla na favelas naanị n’ihi na ha na-edu ndị Baron na-egbu egbu ma dị oke egwu, ebe m na-abụghị ihe ọ bụla , nke ahụ bụ eziokwu ha ha ha ga-ahụ gị ma ọ bụrụhaala na ị gbalịrị ịbanye visa niile na Biber na-enweghị visa ọ bụ naanị ole na ole ndị a bụ mba ndị ọzọ ewezuga na anyị abụghị nke Brazil chọrọ Visa maka ndị njem si Canada na ọtụtụ nke mba Europe na Africa, mana usoro a dị mfe ma dịkwa mma nke ị gwara m na m nwere ike ịhụ gị n’otu izu.
Ọ dị gị ka Brazil ritere uru na bekee nke Olimpik ka ọ nwere Zika? Nje virus egbochiwo ọtụtụ ndị njem nleta atụle n'okpuru
Gịnị ka Talha pụtara in Urdu?
Talhabụ aha Nwa nwoke Muslim, o nwere otutu Alakụbapụtara, nke kacha mmaTalhaahapụtarabụ Nnukwu Onye Mmekọrịta., na n'imeAsụsụ Urduyapụtaraصحابی رسول ا نام. Aha ahụ bụ aha mbụ Arabik, ọnụọgụ metụtara ya bụ 7.Talhaahapụtarabụ 'Ezigbo enyi.'.Talhaahapụtaran'imeAsụsụ Urdubụ 'Sahabi Rasool Ka Nam'.
Kedu ihe Suleman pụtara na Urdu?
Sulemanahapụtarabụ Nchedo صلحح جو٬سلامتی والا ، dabereSulemandị itoolu. لیمان ahaAsụsụ Urdusitere na otutupụtara. I nwekwara ike ige ntị ebe a ka esi akpọpụtaSulemankpọba n'imeAsụsụ Urdu.
Minha ọ bụ aha Arabik?
Nkembụ iheAha Arabicmaka ụmụ agbọghọ pụtara 'ihe enyere Allah', ya bụ 'onyinye sitere na Allah', 'ngọzi sitere na Allah'.
Gịnị bụ nkọwa nke?
(Ntinye nke 1 nke 3) 1 - ejiri dị ka okwu ọrụ iji gosi ebe ị na-atụle na mgbago ugwu. 2a - eji ya dika okwu eji egosi igosi ma obu nweputa onye amara. b - eji ya dika okwu eji gosi ihe kpatara, ihe kpatara ya, ma obu ihe kpatara oria ojoo.
Gịnị ka Talal pụtara in Arabic?
Na Muslim Aha ụmụpụtaranke ahaTalalbụ: Ọ dị mma. Mima mma.
Gịnị ka Ibrahim pụtara na Urdu?
Ibrahim |AhaỌ pụtaran'imeAsụsụ Urdu- (Aha Abraham pụtara)Ibrahim |ahapụtarabụ Ezigbo enyi, Nna nke Ìgwè, Aha Onye Amụma حضرت ابراہیم کا نام ، پیغمبر کا نام that is a Muslim boy name and kechioma nọmba makaIbrahim |dị itoolu. ابراہیم aha Arabic sitere na otutupụtara.
Mgbatị mgbatị 30 nkeji
Mgbatị ịgba ígwè 30 nkeji - ihe ngwọta nwere ike
Ogologo oge ole ka m kwesịrị ịgba ịnyịnya ígwè? Mee atụmatụ ịbanye n'ịnyịnya ígwè gị ma gbaa 30-60 nkeji, ụbọchị 3-5 n'izu. Bido njem ọ bụla na-ekpo ọkụ. Pedal na nwayọọ, mfe ijeụkwụ maka 5-10 nkeji. Mgbe ahụ bulie ọsọ gị ka i wee malite ọsụsọ. Afrịka 2020
ọzụzụ ịgba ígwè
Traininggba ọsọ ịgba ọsọ - ngwọta maka nsogbu
Cycgba ígwè nwere ike imezi ịgba ọsọ? Gba ịnyịnya ígwè nwere ike ịdị mma maka iwulite ọzụzụ aerobic dị elu na-eme oge etiti. Sprint etiti oge ọgọ obi gị ọnụego max etoju ma mezuo a ngwa ngwa ntụgharị (cadence) nakwa. Mgbe ahụ, m na-eme 10 x 1 nkeji niile, mgbali mbọ kachasị mma, dịka ike ị nwere ike ịga, yana mgbake nkeji 2 nke ịnya ịnyịnya ibu dị mfe. 14 янв. Afrịka 2020
macronutrient ịgba ígwè
Macronutrient ịgba ígwè - ngwọta ga-ekwe omume
Kedu ka m ga-esi okirikiri igwe m? Cycgba tumụ macro gụnyere ịpị na macronutrients gị yana iji otu oke abụba, protein, carbohydrates na calorie mee izu abụọ, wee gbanwee oke ahụ maka izu abụọ ọzọ, were gabazie. Enweghị nri ị ga-ewepụ, ma ọ bụ usoro ndị ọzọ dị mgbagwoju anya. Chukwuemeka odumegwu ojukwu 2018
Ọrịa na-agba ịnyịnya ígwè - onye ndu kachasị
Linggba ígwè nwere ike ịkpata kansa? Nnyocha ọhụrụ mere ka arụmụka na-aga n'ihu na-aga n'ihu banyere ihe ize ndụ ahụike nke ịnyịnya ígwè na-agba ịnyịnya maka ụmụ nwoke: Ndị nchọpụta chọpụtara na ndị na-agba ịnyịnya ígwè ndị na-agba ịnyịnya ígwè karịa nwere ike ịnwe ihe ize ndụ dị elu nke ọrịa cancer prostate, mana ọ bụghị ohere ka ukwuu nke ịmụ nwa ma ọ bụ nrụrụ erectile. 18. 2014.
mgbanwe ịgba ígwè
Gba ígwè mgbanwe - inogide ngwọta
I nwere ike ida abụba afọ site na ịgba ígwè? Ee, ịgba ịnyịnya ígwè nwere ike inye aka tufuo abụba afọ, mana ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosiri na ịgba ígwè na-agagharị agagharị nwere ike ime ka abụba zuru oke ma kwalite ịdị arọ dị mma. Iji belata mkpụmkpụ afọ n'afọ, mmega ahụ aerobic na-adị oke ike, dị ka ịgba ịnyịnya ígwè (ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), na-adị irè iji belata abụba afọ.
foto igwe kwụ otu ebe
Gba igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi ya
Olee otu esi esere foto mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè? Nwere ike ịse foto nke otu igwe kwụ otu ebe n'ihu, ọkacha mma n'okporo ụzọ dị jụụ ma ọ bụ n'okporo ụzọ ịnyịnya ebe ị na-etinyeghị onwe gị ma ọ bụ ha n'ihe ize ndụ site na iji foto ahụ. Can nwere ike were gị onwe gị mgbe ị na-agba ịnyịnya, site n'akụkụ ma ọ bụ site n'ihu. Ijide igwefoto / ekwentị ahụ n'akụkụ dị elu ga-ejide ndị ọgba tum tum ọ bụla nọ n'azụ gị, kwa.